Qiimeynta awoodda ciyaartoyda horyaalka La Liga ee Isbuucaan, goolhayaha Barca ayaa hogaaminaya, halkee ayuuse ku jiraa CR7? | Ciyaarside.com
Qiimeynta awoodda ciyaartoyda horyaalka La Liga ee Isbuucaan, goolhayaha Barca ayaa hogaaminaya, halkee ayuuse ku jiraa CR7?
Goolhayaha kooxda Barcelona Marc-Andre ter Stegen ayaa ugu sarreeya qiimeynta awoodda ciyaartoyda horyaalka Spain ee Isbuucaan (Sky Sports La Liga Power Rankings) wuxuuna ka horreeyaa goolhayaha kooxda Valencia Neto.
Goolhayaha heerka caalami ee dalka Germany ayaa todobo badbaado sameeyey isla markaana shabaqa ilaashaday kulankii ay Barcelona guusha 3-0 ah ka gaartay Leganes Sabtidii, wuxuuna Barcelona ku hogaamiyey inay afar dhibcood oo nadiif ah hogaanka horyaalka La Liga uga heyso Valencia.
Valencia ayaa guul 1-0 ah ka gaartay Espanyol iyadoo sii adkeysatay kaalinteeda 2aad ee La Liga, goolhayeheeda Neto ayaana sameeyey afar badbaado kulankaas, ciyaartiisii 6aad ee horyaalka La Liga ayuuna shabaqiisa ilaashaday.
Xiddiga Barca Lionel Messi ayaa hogaaminaya guud ahaan qiimeynta awoodda ciyaartoyda horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedkaan, taasoo ay sameysay Sky Sports. Xiddiga ay xifaaltamaan ee kooxda Real Madrid Cristaino Ronaldo ayaana kaalinta 85aad uga jira qiimeyntaan maadaama uu qaab ciyaareedkiisii ugu liitay ee Primera Division ku jiro waqtigaan.
Neto iyo Ter Stegen ayaa la filayaa inay noqdaan kuwa farqiga ah marka ay Valencia iyo Barcelona ku kulmaan garoonka Mestalla Stadium Sabtida kulan ka tirsan horyaalka Spain. Valencia ayaana isha ku heysa inay hal dhibic usoo jirsato wiilasha tababare Ernesto Valverde, iyadoo guul ka rajeyneysa kulankaan, 24 boos ayuuna hoos u dhacay Isbuucaan marka laga hadlayo 50ka xiddig ee ugu awoodda badan La Liga Isbuucaan.
QIIMEYNTA SKY SPORTS POWER RANKINGS HALKAAN HOOSE AYAAD KA DHAMMEYSTIRAN KARTAA.
Qiimeynta awood ciyaareedka xiddigaha horyaalka La Liga ee Isbuucaan
20ka kooxood ee horyaalka La Liga iyo xiddigaha ugu awoodda badan
50ka xiddig ee ugu awoodda badan horyaalka La Liga xilli ciyaareedkaan oo dhan